२o७६ कार्तिक ७ बिहीबार
काठमाडौँ । राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई विसं २०७५ को मदन शिला स्रष्टा सम्मान अर्पण गरिएको छ ।
मदन शिला प्रतिष्ठानद्वारा स्थापित सो पुरस्कारको राशि १ लाख १ हजारसहित सम्मानपत्र रहेको छ ।
यसैगरी प्रतिष्ठानले सोही वर्षको साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार उन्ननय र दियालो साहित्यिक पत्रिकारलाई प्रदान गरियो । ती पुरस्कारको राशि ५० हजारसहित सम्मानपत्र रहेको छ ।
नेपाली साहित्यिक सम्मेलन दार्जलिङको मुखपत्रका रुपमा त्रैमासिकरुपमा दियालो प्रकाशन हुँदै आएको छ । यसका प्रधानसम्पादक नेपाली साहित्यिक सम्मेलन दार्जलिङका अध्यक्ष डा. चन्द्रकुमार राई रहेका छन् ।
यसैगरी उन्नयनका प्रधानसम्पादकमा अच्युतरमण अधिकारी छन् । कार्यक्रममा ती पत्रिकाका सम्पादक डा. राई र अधिकारीले पुरस्कार तथा सम्मान ग्रहण गरेका थिए । सो अवसरमा राष्ट्रकवि घिमिरेले साहित्यकारलाई साहित्यका आँखीझ्यालबाट नियाल्न र राजनीतिक चस्माले नहेर्न आग्रह गरे । उनले भने, “मैले जीवनमा जे कर्म गरेँ, अहिले मलाई समाजले त्यहीरुपमा पुरस्कृत गरिराखेको छ । कर्म गर्न छाड्न हुँदैन ।”
राष्ट्रकवि घिमिरेले सरकारले आफू बिरामी पर्दा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइ दिएकोमा धन्यवाद दिए । शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले ती व्यक्तित्वलाई पुरस्कार अर्पण गर्दै आफूले राष्ट्रकविबाट साहित्य रचना सिकेको स्मरण गरे ।
नेपाली भाषा र संस्कृतिको क्षेत्रमा धेरै अन्वेषण बाँकी रहेको उनले बताए । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रा.डा. वासुदेव त्रिपाठीले राष्ट्रकवि घिमिरेलाई प्रतिष्ठानले पुरस्कृत गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
काठमाडौँ । राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई विसं २०७५ को मदन शिला स्रष्टा सम्मान अर्पण गरिएको छ । मदन शिला प्रतिष्ठानद्वारा स्थापित सो पुरस्कारको राशि १ लाख १ हजारसहित सम्मानपत्र रहेको छ । यसैगरी
राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई फेरी भारतको मेदान्त लगियो
काठमाडौं । राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि आइतबार बिहान पुनः भारतको नयाँ दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालमा लगिएको छ । शनिबार मात्र उपचारपछि भारतबाट फर्किएका राष्ट्रकवि घिमिरेलाई फलोअपका लागि आइतबार बिहान धापासीस्थित
काठमाडौं । राष्ट्रकवि माधव घिमिर को भारतमा भैरहेको उपचार बारे परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रकवि घिमिरेको हरियाणा राज्यको गुडगांवस्थिति मेदान्त अस्पतालको हाइकेयर युनिटमा उपचार भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले